D-Bil TP ALP GGT - Waxqabadka BeerkaⅡ Qalabka degdega ah ee degdegga ah ee tijaabada daryeelka-Sinocare
D-Bil TP ALP GGT - Waxqabadka Beerka Kit Qalabka Gawaarida degdega ah
[emailka waa la ilaaliyay] Qalabka Bilirubin ee tooska ah / Wadarta Borotiinka / Alkaline Phosphatase / Glutamyl Qalabka loo yaqaan 'Transferase Reagent Kit' waxaa loogu talagalay in tiro ahaan lagu go'aamiyo uruurinta bilirubin toos ah (DB) iyo wadarta borotiinka (TP), iyo waxqabadka of alkaline fosfatase (ALP) iyo γ-glutamyl transferase (GGT) oo ku jira dhiigga aadanaha.
DB, oo sidoo kale loo yaqaan 'bilirubin conjugated', ayaa la soo saaraa markii bilirubin aan toos ahayn uu galo beerka oo uu isku daro glucuronic acid iyada oo ay saameyn ku yeelanayso wareejinta glucuronyl. DB-ga sare wuxuu muujinayaa inay jiraan dhibaatooyin bilirubin ah oo looga soo saaro marinka marinka ka dib markii uu ka baxo beerka.
Caafimaad ahaan, TP-ga sare u kacay iyo hoos u dhaca TP labaduba waa muhiim. Isku-uruurinta plasma sababtoo ah biyo luminta, ama soo-saarista kororka ee borotiinka dhiigga, waxay sababi kartaa isku-uruurinta wadarta borotiinka inay sare u kacdo; hoos u dhaca guud ee borotiinka waxaa sababi kara: biyo baxa oo kordha, nafaqo daro ama isticmaalka oo kordha, waxsoosaarka oo yaraada oo ku dhaca dhaawaca beerka, ama luminta tiro badan oo borotiin ah.
ALP wuxuu kujiraa unugyo kaladuwan oo bini aadam ah dhamaan jirka bini'aadamka. Qiyaasta ALP waxaa inta badan loo adeegsadaa ogaanshaha iyo la socoshada cudurada beerka, xanuunada xameetida iyo cudurada la xiriira lafaha.
GGT-da ee dhiigga badiyaa waxay ka timaaddaa beerka. Waa tilmaame xasaasi ah oo ku saabsan cudurka beerka, maadaama GGT sare lagu arko cudurrada beerka ee sababo kala duwan.
Nidaamka falcelinta wajiga dareeraha ah, iyadoo la adeegsanayo habka dhamaadka dhibcaha & habka habka qiimeynta waxay u horseedaa natiijo sax ah
Natiijada waxaa lagu heli karaa 13 daqiiqo
Kaydadka iskiis u shaqeeya & hal-isticmaal